नेपाल लाइभ सोमबार, वैशाख ६, २०७८, २१:०५
काठमाडौं- नेकपा एमालेको पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीको सोमबार सुरु बैठक १० गतेसम्मलाई स्थगित भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटरमा बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गरेका थिए। साथै, उनले राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गरेका छन्। प्रतिवेदन सुझावसहित पारित भएको प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए।
बैठकले साउन २५ देखि २७ गतेसम्म राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्को बैठक गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रतिनिधिसभा विघटनपछि ओलीले आफू पक्षको नेकपामा थप गरेका सबै केन्द्रीय सदस्यहरुलाई राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद् सदस्यमा रुपान्तरित गरिएको छ। परिषद् बैठकले विधान सम्मेलनको तयारी र विधान संशोधन मस्यौदालाई पारित गर्ने बताइएको छ।
बैठकले माधवकुमार नेपालसहित उनी निकटका केही नेताहरुलाई स्पष्टीकरण सोध्‍ने निर्णय गरिएको छ। स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभए १० वैशाखमा बस्‍ने बैठकबाट कारबाही गर्ने जनाइएको छ। नेता नेपाल, भीम रावल, घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, प्रकाश ज्वाला, अम्मर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढालाई स्पष्टीकरण सोध्‍ने निर्णय गरिएको ज्ञवालीले जानकारी दिए।
निर्वाचनका लागि तम्तयार रहन पार्टीपंक्तिलाई आग्रह
ओलीद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा आगामी कार्यभारको रुपमा तीन वटा कुरालाई मुख्य जोड दिइएको छ। जसमध्ये निर्वाचनमा जानुपर्ने परिस्थिति रहेकाले तयारी रहन कुरा पनि छ। 'कुनै पनि बेला निर्वाचनमा जानुपर्ने भएकाले त्यसका निम्ति तम्तयार हुनको निम्ति पार्टीपंक्तिलाई आह्वान गरिएको छ,' बैठकपछि ज्ञवालीले भने।
सांगठनिक प्रतिवेदन पनि पारित
बैठकले महासचिव ईश्वर पोखरेलद्वारा प्रस्तुत संगठनात्मक प्रतिवेदन पारित गरेको छ। प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार प्रतिवेदनमाथि छलफल भई पारित गरिएको हो। प्रतिवेदनमा पार्टीलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि करिब-करिब ६ महिने कार्ययोजना रहेको ज्ञवालीले बताए। जसमा जेठदेखि मंसिरमा हुने महाधिवेशनसम्मको कार्यतालिका रहेको छ।
'जेठ मसान्तभित्र हामी सबै प्रदेशदेखि लिएर पालिका तहसम्मका सबै कमिटीहरुलाई पुनर्गठन सकिसक्छौं। असारसम्म पार्टी सदस्यता नवीकरण गरिसक्छौं,' प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै ज्ञवालीले भने।
उनका अनुसार, भदौभर वडा अधिवेशन, पालिका अधिवेशन र जिल्ला अधिवेशन गरिने छ। त्यस्तै, असोजमा प्रदेश अधिवेशन गरिने छ। 'मंसिरमा पार्टी महाधिवेशन सम्पन्‍न गर्ने गरी हामीले संगठनात्मक चार्ट, कार्यतालिका नै बनाएको संगठनात्मक प्रस्ताव पारित गरेका छौं,' ज्ञवालीले भने।
'माधव नेपाल पक्षको सर्त सही छैन'
माधव नेपाल पक्षले फागुन २८ गते ओली पक्षले गरेको निर्णय खारेज हुनुपर्ने र पार्टीलाई २०७५ जेठ २ गतेको अवस्थामा फर्काउनुपर्ने भनी राखेको सर्त सही नभएको ज्ञवालीले बताए। 'ती सर्तहरु सही छैनन्। उहाँहरुले जुन अवस्थामा पार्टीलाई पुर्‍याउनुभएको थियो। हामी जेठ २ मा त हामी फर्केकै छौं। जेठ २ मा फर्किनु भनेको साविक नेकपा एमालेका २४१ जना सदस्यहरुको बैठक बस्‍ने भनेको हो। जुन हामीले बैठक बस्यौं। त्यो बैठकले नै माओवादी पृष्ठभूमिबाट आउनुभएका र आन्दोलनको पक्षमा उभिनुभएका २३ जना कमरेडहरुलाई केन्द्रीय कमिटीमा राख्‍ने र विधानका केही बाधा अड्काउलाई फुकाउने काम गरेको हो। यी दुइटा कुराप्रति आपत्ति हुनुपर्ने कारण के?,' उनले प्रश्न गरे।
ज्ञवालीले फागुन २८ गतेको बैठकले कसैलाई कारबाही नगरेको, पदाधिकारीबाट बर्खास्त नगरेको र कसैलाई पार्टीबाट निष्कासन नगरेको बताए। 'बरु त्यसले त आह्वान गरेको छ- जहाँजहाँ तपाईंहरु पुग्‍नुभएको छ। आन्दोलनको अहितमा जसरी काम गर्नुभएको छ। त्यसप्रति आत्मालोचक भएर फर्किनुस्,' उनले भने।
ज्ञवालीले फागुन २८ गतेको बैठकप्रति अहसमति राख्नुपर्ने कुनै कारण नभएको बताए। उनले माधव नेपाल पक्षहरु बैठकमा आउनुको विकल्प नभएको बताए। 'अहिले विभाजनकारी गतिविधिमा लागेका नेताहरुले अन्तिम विनाश हुनुभन्दा अगाडि गम्भीरतापूर्वक रिभ्यु गर्नुस् आफैंले आफैंलाई। र, त्यो गलत बाटो छोड्नुस् भन्‍ने हाम्रो आशय हो,' उनले भने।
माधव नेपालप्रति ओलीको आक्रोश
आफ्नो सम्बोधनमा ओलीले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालप्रति तीव्र आक्रोश व्यक्त गरे। उनले नेपाल अर्काको पतिका लागि सती गइरहेको टिप्पणी गरे। 'सती प्रथा अन्त्य भइसक्यो। त्यो प्रथा रहँदा पनि ती विचरा अबला नारीहरुलाई आफ्नो पतिको नाउमा सती पठाइन्थ्यो। तर, आज माधव नेपालहरु अर्काको पतिको लागि सती गइरहेका छन्। आफ्नो पार्टीको सरकार ढालेर अरुको सरकार बनाउन सांसदहरुलाई फाँसी चढाउँदै छन्। यो उनको ऐतिहासिक अपराध हो,' बैठकमा ओलीले भने।
ओलीले प्रचण्ड र माधव नेपालले अपराध गरेकाले इतिहासले कलंकको टीका लगाउने बताए।
ओलीले नेपालले नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक अलोकतान्त्रिक, गैरसंसदीय, अराजक हर्कत गरेको उनको आरोप थियो। ओलीलाई नेपाललाई एमालेलाई प्रचण्डको पाउमा चढाएको बताए। 'कांग्रेसलगायत गैरकम्युनिस्टहरुको नेतृत्वमा सरकार बनाऔं। हामी 'फ्लोर क्रस' गर्छौं। यो सरकार तुरुन्त ढाल्नुपर्‍यो भन्दै रोदन गरेर घरदैलो गर्न थालेका छन्,' ओलीले भने, 'अराजक, अस्थिर, अत्यन्त घातक, देशद्रोही, कम्युनिस्ट अन्दोलनलाई खाडलमा हाल्ने प्रवृत्तिको विरुद्ध पार्टीले कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नेछ।'
ओलीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को पनि आलोचना गरे। ओलीले गोयलसँग सहमति गरेको भन्दै प्रचण्डले नै आफूविरुद्ध कुप्रचार गरेको आरोप पनि लगाए। उनले प्रचण्ड दुईमुखे प्रवृत्तिको भएको पनि बताए।
'एक मुखले देशभक्तिको कुरा गर्छन्। अर्को मुखले राष्ट्रघाती काम गर्छन्। एकातिर न्याय र सुशासनको कुरा गर्छन्। अर्कोतिर आपराधिक कर्म र भ्रष्टाचार गर्छन्,' उनले भने।
'संघीयता विरोधी, अलोकतान्त्रिक, अराजक, अनुशासनहीन काम गर्ने, समानान्तर कमिटी बनाउने र फ्लोर क्रस गराउनेसम्मको अपराध गरेकाले इतिहासले प्रचण्ड र माधव नेपाललाई कंलकको टीका लगाउनेछ,' ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक सदस्यले जानकारी दिए, 'केपी ओलीलाई घोक्र्याउँछु, धुलो चटाउँछु, भित्तामा टाँस्छौ भन्दै हिँड्ने प्रचण्ड र माधव नेपाललाई अब जनताले धुलो चटाउने छन् र भित्तामा टाँस्‍ने छन्।'
ओलीले पत्रकार महासंघको चुनावमा प्रेस चौतारीको विरुद्ध ११ संगठन मिलेर हराएको पनि चर्चा गरे। केपी ओलीलाई सबक सिकायौं भन्नेहरुप्रति उनले 'महासंघ जितेर के भयो? के उपलब्धि प्राप्त गरे?' बुझ्‍न नसकिएको टिप्पणी गरे।
'अब चार पार्टी मिलेर हामीलाई चौथो बनाउने रे! ठीक विश्लेषण गर्नुभयो। अब एमाले 'वन टु वन' भिड्दैन। सबै मिलेर आउनु,' उनको चेतावनी थियो, 'प्रचण्ड र माधव नेपाल अबको चुनावमा कहाँबाट लड्ने हो? कसरी सासद हुने हो? चुनाव पछाडि गठबन्धन बनाउन पनि कोही आउने छैन। त्यही भएर उहाँहरुका लागि चुनाव प्रतिगमन नै हो।'